MICROFLOW rivotra diffusers zavatra nataon-permeable lamba hoatr'izany ny ambaratonga ny porosity manokana. Olona an-tapitrisany ny rivotra fiaramanidina kely dia afaka amin'ny alalan'ny Diffuser lamba.
Matetika, MICROFLOW diffusers dia ampiasaina mba displace fa tsy afangaro rivotra. Mba hanatanterahana rivotra fifindran fiaramanidina ny rivotra dia tsy maintsy maneso haingana be. Aiza ny POWERFLOW fiaramanidina rivotra mety ho 20 na mihoatra mba maneso tanteraka, ny fiaramanidina kely maneso MICROFLOW rivotra ao anatin'ny 6 "ny Diffuser ivelany.
Noho ny velocity ny rivotra fiaramanidina kely slows tena haingana, ny rivotra ankapobeny mitady nidina toy ny Lamesa sy ny displace ny rivotra ao amin'ny ambaratonga ambany ny efitrano.
MICROFLOW rivotra diffusers dia ampiasaina voalohany indrindra nandritra ny telo fampiharana manokana. Koa satria izy ireo fa tsy afangaro displace rivotra, dia tena mahomby amin'ny fanesorana rivotra maloto. Faharoa, MICROFLOW diffusers koa ho toy ny sivana eo amin'ny faritra saro-pady, toy ny fanodinana sakafo, fa avy eo kosa mila famotsiam matetika. Ao amin'ny tena akaiky, saro-pady faritra, dia afaka hamonjy mangatsiatsiaka MICROFLOW rivotra tsy misy drafts.
Ny lafin-javatra manan-danja eo amin'ny famolavolana Diffuser MICROFLOW rivotra dia lamba porosity, voasakantsakan'ny tsindry, ary ny lavany sy ny Diffuser Diffuser savaivony. Zava-dehibe ny mampiasa ny sivana izay mitohy amin'ireo MICROFLOW diffusers mba hampihenana famotsiam. Fampiharana dia ahitana tolo-kevitra; Office toerana, FIFANDRAISAN-DAVITRA, Sakafo fanodinana, Classroom, madio efi-trano, sy ny fitsapana Labs.
Cable kabone dalamby Halo Suspension HD Rail
Classroom madio Rooms Food Processing Office Space
Air Jet Plugs Condensate tatatra Manaova tady Fabric Damper Fittings anaty Ny Cap Logos Zipper sy ny Velcro Connections
polyester dia Premium kilasy uncoated lamba. Izany dia kivy mafana ny 350 ° F ary azo laundered amin'ny fizarana kely. Polyester ny afo, ary nihaona tamin'i ASTM retardant E-84 Class A.
a) Cable: fihenjanana tariby no tena safidy ara-toekarena. Azo diameters rehetra, na reny tokan-tariby hatramin'ny 30 "savaivony, ary avo roa heny hatramin'ny 48" savaivony ary telo mihoatra noho izany. Snaphooks dia fizarany tamin'ny 36 "toerana sy ny misy amin'ny plastika, Stainless vy. Cable Misy amin'ny nandrisika, Stainless vy, sy vinyl mifono. Ny rafitra dia ahitana ny tariby (3/16 "savaivony), turnbuckle, eyebolts sy ny tariby clamps.
b) Halo Suspension: New Halo fihenjanana rafitra fampiatoana (HTS) manome ny toetoetry ny rafitra Diffuser FlowCon ho inflated rehefa fikirakirana ny rivotra rafitra eny. Io safidy dia azo ampiasaina amin'ny toerana iray tariby tsotra fampiatoana na ny tokan-tena HD lalamby hitandrina ny FlowCon Diffuser mitady inflated tsy airflow. Voafetra from 10 "ny 36" savaivony, izany safidy tanteraka ny fampiharana izay Diffuser deflated tanana teo no olana. Fizarana Mora ho voasambotra izy ka nanasa tsy misy asa fanampiny. Anisan'ny singa iray fitsipika laharana fihenjanana tariby na ny tokan-tena lalamby HD rafitra.
c) HD Rail: New HD anodized aluminium lalamby no Premium rafitra lalamby. Malama tsara tarehy manantena ny rafitra Diffuser FlowCon lamba. Azo diameters rehetra, na reny tokan-dalamby hatramin'ny 30 "savaivony, ary avo roa heny hatramin'ny 48" savaivony ary telo mihoatra noho izany. Gliders dia fizarany tamin'ny 36 "toerana sy ny misy amin'ny plastika. Ny rafitra dia ahitana HD fiarandalamby, lalamby fanohanana, couplers, ary mitsangana fanohanana (hafainganam-pandeha rohy). Rayon bends misy ny hihaona kiho rayon.
d) kabone Rail: kabone anodized aluminium lalamby dia azo ampiasaina ho an'ny fampiharana izay FlowCon Diffuser rafitra tsy maintsy ho akaiky valin-drihana. Kabone rail tsy maintsy miraikitra amin'ny valin-drihana na fisaka T-Bar rafitra. Kabone tendrombohitra rail dia natao mba hanohana ny 'D' Duct diffusers. D duct diffusers dia ampiasaina rehefa haavon'ny valindrihana dia mampanahy. Ny roa lalamby kabone rafitra ilaina mba hanohanana ny 'D' duct Diffuser. Habe from 6 "ny 18" nipoaka (12 "ny 36" sakany) no misy. Ny rafitra dia ahitana ny kabone fiarandalamby an-tendrombohitra, ary ny farany tapa. Rayon bends misy.
Manaraka: Power Flow Fabric Duct